Iza moa i Babylona Lehibe? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Oromo Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Télougou Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Iza moa i Babylona Lehibe?
Ny fivavahan-diso rehetra ilay hoe Babylona Lehibe resahin’ny bokin’ny Apokalypsy, ary tsy ankasitrahan’Andriamanitra izy ireo. * (Apokalypsy 14:8; 17:5; 18:21) Marina fa samy manana ny mampiavaka azy daholo ireny fivavahana ireny. Samy tsy mitaona ny olona hanompo an’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra, anefa izy rehetra.—Deoteronomia 4:35.
Ahoana no hamantarana an’i Babylona Lehibe?
Sary an’ohatra ilay hoe Babylona Lehibe. Antsoin’ny Baiboly hoe “vehivavy” sy “mpivaro-tena lehibe” izy io. Voalaza ao fa “zava-miafina” ilay anarany hoe “Babylona Lehibe.” (Apokalypsy 17:1, 3, 5) “Famantarana” no tena resahin’ny bokin’ny Apokalypsy, ka azo antoka fa sary an’ohatra ilay resahiny fa tsy vehivavy ara-bakiteny. (Apokalypsy 1:1) Resahina ao koa fa “mipetraka eo ambonin’ny rano maro” izy io. Manondro “olona sy vahoaka sy firenena ary olona samy hafa fiteny” ilay hoe rano. (Apokalypsy 17:1, 15) Tsy misy vehivavy mahavita an’izany.
Fandaminana eran-tany ilay hoe Babylona Lehibe. Milaza ny Baiboly fa ‘tanàna lehibe mifehy an’ireo mpanjakan’ny tany’ izy io. (Apokalypsy 17:18) Manan-kery eran-tany àry izy io.
Fandaminana ara-pivavahana ilay Babylona Lehibe, fa tsy ara-politika na ara-barotra. Tena mpivavaka be ny olona tany Babylona fahiny. Nalaza ho mpanao ‘ozona famosaviana sy mpilalao ody’ koa izy ireo. (Isaia 47:1, 12, 13; Jeremia 50:1, 2, 38) Nanjaka tao ny fivavahan-diso, ary nanohitra an’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra, izany. (Genesisy 10:8, 9; 11:2-4, 8) Nanambony tena ireo mpanjakan’i Babylona, ka nanao tsinontsinona an’i Jehovah sy ny fivavahana aminy. (Isaia 14:4, 13, 14; Daniela 5:2-4, 23) Malaza ho ‘mpilalao ody’ koa i Babylona Lehibe. Fandaminana ara-pivavahana àry izy io.—Apokalypsy 18:23.
Tsy fandaminana ara-politika ilay hoe Babylona Lehibe, satria hitomany ny “mpanjakan’ny tany” rehefa ho rava izy io. (Apokalypsy 17:1, 2; 18:9) Asehon’ny Baiboly koa fa samy hafa i Babylona Lehibe sy ny “mpivaro-mandeha.” Tsy fandaminana ara-barotra àry izy io.—Apokalypsy 18:11, 15.
Tsangambaton’i Nabonida, mpanjaka babylonianina, misy marika famantarana an’ireo andriamanitra telo: Sîn, Ishtar, ary Shamash
Mety tsara ilazana ny fivavahan-diso ilay hoe Babylona Lehibe. Tsy manampy ny olona mba hivavaka amin’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra, ny fivavahan-diso, fa mampirisika azy ireo hivavaka amin’andriamani-kafa. Milaza ny Baiboly fa toy ny hoe mijangajanga izy ireo amin’izany. (Levitikosy 20:6; Eksodosy 34:15, 16) Efa nampianarina tany Babylona fahiny, ohatra, hoe telo izay iray Andriamanitra, ary tsy mety maty ny fanahy. Nampiasa sary koa izy ireo rehefa nivavaka. Mbola manao hoatr’izany ny fivavahan-diso hatramin’izao. Tia an’izao tontolo izao koa izy ireo. Nivadika àry izy ireo ka ampitovin’ny Baiboly amin’ny olona manitsakitsa-bady.—Jakoba 4:4.
Hoy ny Baiboly momba an’i Babylona Lehibe: ‘Nanao akanjo volomparasy sy mena midorehitra izy sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla.’ (Apokalypsy 17:4) Mitovy amin’izany mihitsy ny fivavahan-diso. Manan-karena be izy ireo sady tia mampideradera fananana. Milaza ny Baiboly hoe avy aminy ny “zava-maharikoriko amin’ny tany”, izany hoe ireo fampianarana sy fanao manala baraka an’Andriamanitra. (Apokalypsy 17:5) “Olona sy vahoaka sy firenena ary olona samy hafa fiteny” no mpivavaka ao amin’ny fivavahan-diso, ary manohana an’i Babylona Lehibe izy ireo.—Apokalypsy 17:15.
I Babylona Lehibe no tompon’andraikitra tamin’ny nahafatesan’izay ‘rehetra naripaka tetỳ ambonin’ny tany.’ (Apokalypsy 18:24) Mampirisika ny olona hiady ny fivavahan-diso sady manohana ny asa fampihorohoroana. Tsy vitan’izay fa tsy nampianatra ny marina momba an’i Jehovah, ilay Andriamanitra fitiavana, koa izy ireo. (1 Jaona 4:8) Nahatonga vonoan’olona mahatsiravina izany. Ara-dalàna àry raha tsy maintsy ‘mivoaka avy ao aminy’, izany hoe miala amin’ny fivavahan-diso, izay te hahazo sitraka amin’Andriamanitra.—Apokalypsy 18:4; 2 Korintianina 6:14-17.
^ feh. 1 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?”
Hizara Hizara Iza moa i Babylona Lehibe?
ijwbq no. 94